गाँजा (वैज्ञानिक नाम: क्यानाबिस स्याटिभम) पूर्वी एसियामा उत्पत्ति भएको मानिने फूल फुल्ने बोट हो। हाल विश्वभरी नै यसको व्यापक खेती भएको पाइन्छ। इतिहास भरि नै यसको खेती गरिएको उल्लेख भएको पाइन्छ। यसको खेती औद्योगिक फाइबर, बीज, तेल, खाना, मनोरन्जन, धार्मिक, आध्यात्मिक र चिकित्सा क्षेत्रमा विभिन्न रुपमा गरिन्छ। यसको बोटका वि‍भिन्न भागहरु बिभिन्न तरिकाले प्रयोग गरिन्छ। यस प्रजातिलाई पहिलो पटक कार्ल लिन्नियसले सन् १७५३ मा वर्गीकृत गरेका थिए। "सतिभा" शब्दको अर्थ खेती गर्नु भन्ने हुन्छ।
वानस्पतिक विशेषता‍‍[सम्पादन गर्ने]
क्यानाबिस स्याटिभाका फूलहरू भाले वा पोथी गरी भिन्न हुने गर्दछन्। यसलाई फल्न छोटो दिनको आवश्यकता पर्दछ। यसमा स्टेमिनेट (भाले भाग) सामान्यतया अग्लो र पिस्टिलेट (पोथी भाग) भन्दा केही कमजोर हुने गर्दछन्। पोथी बोटको फूलहरू रेसिम बनोटमा विकसित भएका हुन्छन् र यसले सयौँ बीउ उत्पादन गर्न सक्छ। भाले भाग परागकण बनाउँछन् र पोथी भाग भन्दा पहिले नै मर्दछन्। केही अवस्थाहरूमा (१२ देखि १) घण्टा सम्मको प्रकाश अवधि भएमा, दुबै पोथी तथा भाले भागको समान संख्यामा विकास हुने गर्दछ। वंशाणुगत कारकहरूले बोटबिरुवालाई भाले वा पोथी बन्ने कुरामा भुमिका खेले पनि बाह्य वातावरणले पनि यसलाई फरक पर्न सक्दछ। दुवै भाले तथा पोथी भाग भएका फूलहरु पनि विकास गरिन्छन्।
रसायनिक विशेषता[सम्पादन गर्ने]
चेतनामा असर गर्न सक्ने टेट्राहाइड्रोकाभिनबोल (टिएचसी) यसमा मुख्य रुपमा रहे पनि यसमा ५०० भन्दा बढी रसायनिक यौगिकहरू हुन्छन्। ती मध्ये कम्तिमा ११३ क्यानाबिनोइड्स् नगन्य मात्रामा पाइन्छन्। टिएचसी बाहेक, केहि बोटबिरुवाले अर्को क्यानाबिनोइड, क्यानाबिडीयोल (सीबीडी), पनि उत्पन्न हुने कुरा पत्ता लागेको छ; यसले स्नायु प्रणालीमा टीएचसीको प्रभावलाई रोक्न देखाएको छ। क्यानाबिस प्रजातिहरूको रासायनिक संरचनाका भिन्नताले मानवमा फरक प्रभाव पार्न सक्छ। सिंथेटिक टीएचसी, जसलाई ड्रोब्यानिओल भनिन्छ; यसमा क्यानाबिडिओल (सीबीडी), क्यानाबिनोल (सीबीएन), वा अन्य क्यानाबिनोइडहरू पाइदैँन। यस कारण एक औषधिय प्रभावहरू प्राकृतिक रुपमा तयार भएकाहरुका भन्दा फरक प्रभाव रहन्छ।
यसका बिउ मुख्य रूपमा पहाडी क्षेत्रमा अचार खान प्रयोग गरिन्छ र यस बाहेक हेम्पसीड तेल बनाउन प्रयोग गरिन्छ; जसको प्रयोग खाना पकाउन, बत्ती बाल्न, वा पेन्टको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई चराका आहारका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले जनावरहरूको लागि पोषणको स्रोत प्रदान गर्दछन्। फूल र फलहरूमा मनोवैज्ञानिक रासायनिक यौगिकहरू हुन्छन् (क्यानाबिनोइड्स) लाई मनोरन्जन, औषधी र आध्यात्मिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छन्। फूल र फलहरू लाई विभिन्न प्रकारमा प्रयोग गरिसके पछि यसलाई मारिजुआना भनिन्छ; (यसका थुँगा, रेसिनस तत्वको यसमा प्रयोग गरिन्छन्)। मारिजुआनालाई चरस, धूम्रपान, वाष्पीकरण जस्ता विधिबाट सेवन गर्न सकिन्छ, औषधीय प्रयोगको लागि दूधमा उमालेर र अन्य तरिकामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा, टिन्चर, चिया, र मलहम पनि यसका सामान्य तयारीमा पनि यसका प्रयोग भएका छन्। विशेष गरी भारतको परम्परागत चिकित्सामा सेटिवा प्रजातीलाई मानसिक रोगका लागि (ह्युलोसिनोजेनिक, हिप्नोटिक), एनाल्जेसिक (दुखाइ कम गर्ने) जस्ता विषयमा औषधिय प्रयोग भएका छन्।
यसको तीन मुख्य विभाजनगरु रहेका छन् जसमा फाइबरका निम्ति ‍खेती गरिने जातहरू, बीउका लागि खेती गरिने जातहरू, औषधिय गुण वा मनोरज्जनात्मक हिसाबका लागि खेती गरिने जातहरू समावेश छ।
लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले नेपालमा गाँजा खेतीको उत्पादन, बिक्री वितरण, ओसार प्रसार, सेवन जस्ता गतिविधिमा निषेध लगाई यसलाई गैरकानुनी बनाएको छ। हाल, गाँजा विधेयक ल्याउने विषयमा पनि विभिन्न छलफल र गाँजा खेतीका विषयमा मतभेद रहेका छन्।गाँजाभाङ खेती गरे पनि जेल
↑ "नेपालमा गाँजा खेती: कार्यविधि बन्दै; कस्ता छन् यसका सम्भावना र चुनौती?" (नेपाली) भाषा)। बीबीसी नेपाली। सङ्ग्रह मिति २० अप्रिल २०२२।
↑ Greg Green, The Cannabis Breeder's Bible, Green Candy Press, 2005, pp. 15-16 आइएसबिएन ९७८१९३११६०२७८
↑ "Cannabis sativa in Flora of North America @ efloras.org"।
↑ Cannabis: Evolution and Ethnobotany, क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको छापा, १ सेप्टेम्बर २०१३, पृ: 16–, आइएसबिएन 978-0-520-95457-1।
विकिमिडिया कमन्समा गाँजा सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
विकि प्रजातिमा गाँजासँग सम्बन्धित तस्वीर तथा श्रव्य दृश्यहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=गाँजा_(वनस्पति)&oldid=1068277" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०७:४५, २७ जुन २०२२ मा परिवर्तन गरिएको थियो।